Ulysses waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 22 iyadoo lagu hagaajinayo daabacaada shabakada | Waxaan ka socdaa mac
Codsiyada asaliga ah ee Apple ay kugu siiso nidaamyadooda hawlgalka waa hagaagsan yihiin. laakiin sida iska cad, iyagu waa aasaasi aad ayeyna uga fiicnaan karaan. Waxaa loo maleynayaa inay si cad u sameeyaan si ay ugu oggolaadaan horumariyeyaashu inay u sameeyaan barnaamijyo nololeed shaqooyin badan oo badan oo loogu talagalay barnaamijyadan oo markaa ka dhigaya inuu isticmaalaha dareemayo qanacsanaanta marka uu bixinayo dalabka
Tusaale cad waa Ulysses. Waxaan dhihi karnaa waa erey sameeye, sida kan Pages lagu dhex daray macOS, laakiin hawlo badan oo dheeri ah leh, qaar ka mid ah waxay diiradda saareen daabacaadda dukumiintiyada internetka. Hadda waxaa hadda la cusbooneysiiyay horumarin badan oo ku saabsan nooca 22.
Ulysses ayaa ku cusbooneysiineysa codsigeeda nooca 22 oo leh waxyaabo kale oo cusub oo loogu talagalay in lagu habeeyo muuqaalka muuqaalka ee isku xirnaanta markii la qorayo dukumiinti, iyo sidoo kale ikhtiyaar cusub oo loogu talagalay in lagu daabaco internetka.
Cusboonaysiinta cusub ee la heli karo laga bilaabo maanta, Ulysses cusub ayaa nidaamka ku darsaday micro.blog Meel loogu talagalay boosto.
Horumarinta daabacaadda internetka
Micro.blog waxay bixisaa beddelaad cusub oo loogu talagalay in lagu daabaco shabakadaha bulshada ee hadda jira. Isticmaalayaasha ayaa gacanta ku haya waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxayna la falgeli karaan boostada iyaga oo aan carqaladeyn karin xayeysiiska ama boorarka. - Waa madal madaxbannaan oo fikrad cajaa'ib leh leh, waana ku faraxsanahay inaan iyaga haysanno, ayuu yidhi. Marcus fehn, aasaasaha Ulysses iyo agaasimaha hal abuurka shirkadda.
Noocaan cusub ee Ulysses wuxuu kaloo hagaajinayaa daabacaadda gudaha WordPress. Isticmaalayaasha hadda way cusbooneysiin karaan dukumiintiyada horay loo daabacay ee Ulysses. Tusaale ahaan, hadda waa suurtagal in la saxo qoraallada ka dib maqaal hore loo sii daayay.
Ulysses sidoo kale waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay go'aamiyaan sida ay u doonayaan deegaanka iyada oo xulashada xulashada midabada astaamaha kooxda. Cinwaanada sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi karaa cabir ka weyn tifaftiraha si ay ugu fududaato in laga sooco qoraalka intiisa kale.
Ulysses waxaa laga heli karaa Bakhaarka Mac leh bille, qorshe sanadle ah, iyo qiimo qaali ah asaasiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Ulysses waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 22 iyadoo leh horumarin cusub oo ku saabsan daabacaadda khadka tooska ah